CEYMISYADA BULSHADA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat torsdag 31 augusti 2006 kl 08.54
Itee in le’eg ayey ku kaceysaa habnololedka wanaagsan ee bulshadu?
Habnololeedka wanagsan ee bulshada waxa as-aas u ah in cid waliba gacan ka geysato . Midaasina oo lagu gaaryo dhanka khidmada ama cashuuraha oo ey dawladda ama degmooyinka oo si habsami leh loo qeyiyo. Qeybintaa waxaa soo gala ceymiska bulshada – wa ceymisyo gara shakhsiga marxalladaha kla duwan e la soo gudboonada aaa ( matalan ”barnbidrag” lacagta la siiyo ilmaha bishiiba) ama xaladaha adadag e shakhsiga la soo gudboonaada ( sida xanuunka). Laba tusale e kuwaa ka id ah axey yihiin: Syasadda la xiriirta qoyska ee ey ka mid yihiin lacgta dhallaanka e bishii iyo ceymik waalidiinta) tasina oo qiimaha ku kaca sannadkiiba garsiisan yahe 65 milyaardi. Dadyoowga xannuunka ku oan waxa ku kaca dhaqale gareya 130 milardi sannadkiiba. Xisbiyadda badankood waxey tagersan yihiin habwanaagga nolosha, inkasta oo isbiyada miditu dooneyaan iny isbello ku sameyan i miisaaniyadda ku badaayina u yaraato.
Xisbiga haya talada dalka iyo kuwa ey xulufda yihiin ee (v och mp) waxey kor u qaadeen saqafka ugu sareeya ee marshda haddey noqon laheyd ceymiska walidiinta iyo kan dadyoowga xannuunk ku qoran ( laga soo bilabo koowdii Juulay) har inför valet höjt taket på både föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen (från 1 juli). Waxey kaloo go’aamiyen dhaqale kalmo ee la xiriira waalidinta aan wada deggeneyn.
Sidoo kale waxa jira dhinacyo aany isbiyadda saddexda ahi ee bidixdu ka mideysneyn:
* Xisbiga cmiladi ”Miljöpartiet” wuxuu qabaa in la kordhiyo mudada la qaato lacagta waalidka kolka reerku ilmo u dhashaan ”föräldrapenningen” (*) lana gaarsiiyo 18 bilood, iyada oo saddex daloolo daloolna lagu waajibineyo walidkiiba. Xisbiga bidixdu ”Vänstern” wuxuu dooneya in qebta l garsiiyo 50 boqolkiiba. vill gå längre och dela föräldraledigheten (*) 50/50. xisbiga Socialdemokrat-ka wuxuu qaba in habkaa loo daayo sida uu mantab yahey 13 bilood laguna siineyo waalidk 80 boqolkiiba mushaarkoodii, muddadasina oo laba bilood ey wajib ku tahey walidkiiba ( laguna magacabo bilaha abeyasha). Xisbiyada cimilada mp iyo bidixda v ayaa qaba in labada walidba ey guriga wada joogaan bisha ugu horeysa ee nolosha ilmaha.
* Xisbiga bidixda Vänstern oo keliya ayaa qaba in la baabi’iyo waxa lagu magacabo ”karensdagen” maalmaha ugu horreeya ee mushaar la’anta (*) kolka shakhsigu xanuun galo ”sjukförsäkringen” (*).
* Xisbiyada Socialdemokrat-ka iyo bidixda Vänstern waxey qabaan in kor loo qaado saqafka magdhowga la siiyo ruuxa shaqa la’aantu la soo gudboonaato a-kassa. Xisbiga cimilada Mp ayaa middaa diidan.
Xisbiyada midoobey ee midigta ayaa bisha Agoosto go’aan loo dhan yahey ka gaarey arrimmo ey ka mid yihiin siyaasadda la xiriirta Reerka – waxey go’aansadeen in la sharciyeeyo dhaqaale degmooyinku bixiyaan lana siiyo waalidiinta dhallaankooda guryaha ku heysta gaarayana 4 000 oo koron bishiiba.
* Ceymiska dadyoowga xannuunka ku qoran ”Sjukförsäkringen”: Xisbiyada M, kd iyo c ayaa qaba in hoos loo dhigo saqafka islamarkaana maalin lagu kordhiyo maalmaha ugu horreeya ee mushaar la’aanta ee shakhsigu xannuun galo. Xisbiga bulshada ”Folkpartiet” ayaa ku raaci kara in saqafkaa hoos loo dhigo sannadka 2007-da islamarkaana dib kor loogu qaado 2008-da. Xisbigaasi wuxuu kaloo ka soo horjeedaa in maalin mushaar la’aan ah lagu daro xilliga hore ee uu ruuxu jirro galo.
* Ceymiska waalidiinta ”Föräldraförsäkringen”: Xisbiga Mudaraatku ayaa ogolaadey in muddada ey waalidiintu caruurtooda la joogi karaan loo daayo sida ey iminkaba tahey ee 13-ka bilood iyo 80% dhaqaalihii uu waalidkaasi qaadan jirey oo la siiyo, hase yeeshee weli wuxuu ixsbigaasi ku doodayaa in khidmadda laga dhimo labada waalid kooda dakhliga yar.
Xisbiga Bulshadu Fp wuxuu soo jeedinayaa in la gaarsiiyo 90 boqolkiiba mushaarka ey qaataan cid walba ee wakhti is le’eg fasaxaa qaadata.
Xisbiga Senterku (c) wuxuu qabaa in kor loo qaado magdhowga tiirarka magdhowga iyo kan saqafkaba, halka xisbiga Kristendemokrat-ku ( kd) in tiirarka hoose kor loo qaado.
Dhallaanka: Fp wuxuu qabaa in ilmo walba loo furo koonto sannadkiiba oo gaareysa 40 000 oo koronka iswiidhishka ah; Xisbiga Mudaraatka iyo Senterku waxey qabaan in la abuuro miisaaniyad loogu tala galey goobaha xannaanada dhallaanka (*) oo ey awood u leeyihiin isticmaalkeeda waalidiinta dhallaankaa dhashey, Xisbiga kd wuxuu qabaa miisaaniyad loogu tala galey xannaanada dhallaanka ee degmooyinka (*). Iyo dhaqaale kale ee loogu magac darey ”maalmaha dhallaanka ”barndagar” lana bixiyo wixii ka dambeeya kolka uu dhammaado ceymiska waalidiinta.
Hase yeeshee waxey xisbiyada mucaaradku ka mideysan yihiin amuurahan:
* In la waajibiyo korna loo qaado khidmadda a-kassa-da, in la adkeeyo waajibaadka shaqada (*), hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo dadyoowga shaqa la’aanta sagaal bilood dabadeed.
* In awood loo siiyo shaqa bixiyaha waraaq dhakhtareed maalinta ugu horreysa ee shakhsigu xannuunsado
* In hoos loo dhigo mushaarooyinka la siiyo dadka howlgabka horey u galey
* Dareeylka caafimaad kadib dhibaatooyin ka soo gaarey shakhsiga shil baabuur maaha in laga bixiyo ceymiska guud ee bulshada, hase yeeshee lagu wareejiyo masuuliyaddeeda ceymisyada madaxa bannaan.